Qalabka Kala Soocidda
Mashiinka Alxarka Wire Mesh
5XDC Belt taxane nadiifin taxane ah
Ardayda darajooyinka magnetic CLX
Mashiinka polishing taxanaha
QSC saamiga saamiga ...
Mashiinka samaynta alxanka iskuxiran ee hexagonal
Mashiinka hekagonal culus waa aalad xirfad u leh soo saarista hexagonal net, oo alaabooyinkiisa si weyn loogu isticmaalo batroolka, dhismaha, taranta, warshadaha kiimikada, tuubooyinka kuleylinta iyo dhuumaha kale ee shabaqa, laakiin sidoo kale xayndaabka, ilaalinta muuqaalka deegaanka.
Mashiinkaani wuxuu isticmaalaa qaabka kala duwan iyo culeyska gaarka ah ee agabka, walxaha, hoos xawaareynta culeyska, taas oo keentay in kala duwanaanshaha hoos u dhigga iskudheellitirka iyo isu-ruxidda ruxruca loo maro habka iyo qalabka fasalka. Xaglaha islahaa ee dhererka iyo isbadalka ayaa loo hagaajin karaa si aan kala sooc lahayn. Xakamaynta xawaaraha Stepless wuxuu ku habboon yahay noocyada hadhuudhka wareega, gaar ahaan ka shaqeynta soybean. Hal waqti ikhtiyaar ah: dhagax, ciid, waxyaalo jajabay iyo waxyaalo kale oo aan toos ahayn.
TDSL, TDSQ gudbiyaha suunka wareega
Iyada oo ay ugu wacan tahay qaabdhismeedka hab fudud, qiime jaban, guud ahaan xooggaga qaybaha, dayactirka fudud, iyo soosaaradu waxay la jaan qaadi karaan shuruudaha caadiga ah, si ay u noqdaan kuwa isu gudbiyaha dadweynaha. Iyadoo loo eegayo baahiyaha hal, dhowr ama qalab kale oo lagu wareejiyo qalabka saqafka ah ama nidaamka weecsha wareejinta.
Mashiinka 'PJ' polishing machine polishing treatment for noocyada digirta kaladuwan, way fududahay inaad dhaqaaqdo, aad u sarreeya, oo leh qalab boodh leh.
Mashiinka miraha daboolida miraha
Quudinta agab-quudin joogto ah iyo maandooriye; Adeegso wasakhda 'element steel drum; Teknoolojiyadda heerka sare ee heerka sare ee centrifugal disc; Nidaamka kontaroolada korantada oo culeyskiisu sareeyo iyo kuleyl celis labalaab ah.
Mashiinka alxanka xayndaabka birta ah ee 3D bir silig bir ah
Mashiinka alxanka mesh alxamid wuxuu rakibay farsamooyinka xakameynta korantada & elektiroonigga, labadaba wajiga-alxamidda iyo alxanka waqtiga oo ka kooban wareegga korantada elektiroonigga ah iyo isku-dhafan. Gudi hoosaadku wuxuu leeyahay laba nooc oo shaashad taabasho ah iyo badhan ah, ka caqli badan oo macquul ah, mar riixaya, iyo alxamid gooni ah.
Isku-darka taxanaha nadiifinta nooca
Mashiinkaani waa mid dhaqdhaqaaq leh wuxuuna isku daraa duqeynta, wiishka aan jajabin, Labada kala qaadista hawada, kala sooca culeyska gaarka ah, sare u qaadida, culeyska, shaqalaha. Xaraashka hal mar ah wuxuu meesha ka saari karaa qolof adag, qolof-xaar, caws, boodh, wasakh, tufaax yar yar, miro buunshaha, iniinta aboor ku jira, hadhuudhka barafka, hadhuudhka cudurka qolofta, hadhuudhka budada madow, ciil weyn iyo wasakh yar, iwm At isla waqtigaas, maaddadu waxay u qaybsan tahay qayb weyn iyo waxyaalo yaryar, oo laga soo saaray goobo kala duwan.
Taxanaha nadiifinta abuur hawada
Mashiinkaani waa aalad nadiifin aasaasi ah oo lagu daray kala-qaadista hawada iyo baaritaanka. Hawada hawada ee mashiinkan ayaa inta badan lagu dhammeeyaa shaashadda hawada tooska ah. Marka loo eego astaamaha firfircoonida ee hadhuudhka iyo xawaaraha halista ah ee hadhuudhka iyo nijaasta, waxay gartaa ujeeddada kala goynta iyada oo la hagaajinayo xawaaraha socodka hawada.
5XZ-5 Kala-goos gooska
Mashiinku wuxuu ku saleysan yahay walxaha waaweyn ee geedi socodka dareeraha wuxuu soo saari doonaa mabda'a walxaha iyo cufnaanta ifafaale ifafaaleedka, adkeynta cadaadiska hawada, baaxadda cabirrada farsamada sida alaabada beddelashada ee labada dhinac soo saarta delamination, saamiga dejinta ballaaran ilaa qaybta hoose, qayb yar oo ka mid ah kor u qulqulaya, si aad u gasho Aagga Fadhiga, waxay noqon kartaa iyada oo la raacayo shuruudaha awoodda gaarka ah ee walxaha kala duwan ee ka soo baxa geyiga kala duwan, si loo gaaro ujeeddada xulashada.
Isku-darka taxanaha taxanaha miraha nadiifinta gaarka ah
Mashiinkaani waa mid la dhaqaajin karo wuxuuna isku daraa duqeynta, wiishka aan jabin. Labada kala saarista hawada, kala goynta gaarka ah ee gaarka ah, ka saarida boodhka, culeyska, kalasaarka iyo shaqada grader. Xaraashka hal mar ah wuxuu meesha ka saari karaa qolof adag, qolof-xaar, caws, boodh, wasakh, tufaax yar yar, miro buunshaha, iniinta aboor ku jira, hadhuudhka barafka, hadhuudhka cudurka qolofta, hadhuudhka budada madow, ciil weyn iyo wasakh yar, iwm At isla waqtigaas, maaddadu waxay u qaybsan tahay qayb weyn iyo waxyaalo yaryar, oo laga soo saaray goobo kala duwan.
QSC taxanaha isugeynta isugeynta
Mashiinku wuxuu isticmaalaa saameynta socodka hawada iyo kala-baxa gariirka ee qalabka iyagoo hagaajinaya xaylka iyo xagasha is jiidashada, wuxuuna u kala sooci karaa nijaasta culus sida dhagaxyada hadhuudhka, si ay u sameyso qalabka leh saamiga weyn ee salka hoose kuna dhaqaaqa. hoose ilaa sare meel u dhow dusha shaashadda; Alaabada leh saami yar ayaa dusha sare laga joojiyey waxayna ka gudbaan sare ilaa hoose, si loo gaaro saameynta kala go'ida. Moodalka yutiilitiga wuxuu leeyahay faa'iidooyinka dhaqdhaqaaqa ku habboon, cod-weynaha la isku hagaajin karo iyo saameynta dhagaxa wanaagsan.
Xawaare sax ah, miraha iyo baloogyada ciidda isku dhafan ayaa dhex mari kara booska xiran si ay u soo saaraan saameyn weyn oo magnetic. Awoodda soo jiidashada kaladuwan ee mowqifka birlaboolka magnetic marka qalabka iyo ciidda la tuuro, fogaanta tuurista ayaa waliba kala duwan. Abuurka iyo xirmooyinka ciidda ayaa si is-daba-joog ah ugu kala-baxa, si loo gaaro kala-soocidda qumman ee hadhuudhka iyo baaraha carrada.